Jenaraal Xuud “Yuusuf Dabageed Baledweyne Kuma Soo Laaban Karo, Diyaarad Soo Qaadi Kartana Maleh” – Great Banaadir
Jenaraal Xuud “Yuusuf Dabageed Baledweyne Kuma Soo Laaban Karo, Diyaarad Soo Qaadi Kartana Maleh”
BELEDWEYNE – Hoggaamiyaha Golaha Kacdoonka Hiiraan Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) ayaa ka jawaab celiyay Hadal dhawaan uu jeediyay Madaxweyne Ku-xigeenka Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed), kaasoo ahaa inaan Doorasho ka dhici karin Baledweyne hadii uusan imaan Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseyn (Guudlaawe).
Hoggaamiye Abuukar Xuud ayaa sheegay in Baledweyne Amaan tahay, Doorashadana ay ka qabsoomi karto isalamarkaana ugu baaqay Dowladda Fedaraalka Soomaaliya inay Doorashada Kuraasteeda taalo Baledweyne, lagu qaban karo; isagoo balan qaaday iney Amaanka sugu doonaan.
Janeraal Xuud ayaa markale ku celiyay inuusan Cali Guudlaawe imaan karin Magaalada Baledweyne, Doorashadana lagu qaban doono islamarkaana sheegay in Yuusuf Dabageed uu isna kusoo laaban karin Magaalada Baledweyne oo uu lamid yahay Cali Guudlaawe.
“Waxaan cadeynaya in Maanta kadib Yuusuf Dabageed iyo Cali Guudlaawe isku mid inoo yihiin, uuna dib ugu soo labaan karin Magaalada Baledweyne, Diyaarad soo qaadi kartana aysan jirin,” ayuu yiri Jeneraal Xuud.
Hadalka Jeneraal Xuud ayaa imaanaya Xilli Madaxweyne Ku-xigeenka Hir-Shabeelle Yuusuf Dabageed uu ku sugan yahay Magaalada Buula Burde, kaasoo dhawaan sheegay hadii uusan Baledweyne imaan Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe aysan ka dhici doonin wax Doorasho ah oo ku saabsan 25ka Kursi ee Taala Baledweyne loona wareejin doono Jowhar.